Isamsung yaphula zonke izikimu ngokusonga kwayo iselfowuni kunye ne "Infinity" | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Isamsung yenza ubudenge kulo lonke ukhuphiswano "notch" yayo
Kule minyaka mibini yeNotshi, iSamsung izibone kwindawo engaqaliyo ngokuhamba ngokupheleleyo ngale ndlela "yenguqulelo entsha" ethi iApple nazo zonke ezo ntengiso ze-Android zilandelweyo. Kube ngumnqweno wokungqina ukuba inkampani yaseKorea ihlale inyanisekile njani kuyo, ukuze kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ndenze ubudenge kulo lonke ukhuphiswano kunye neenotshi zabo.
Isishiye ngendlela ehlekisayo ngenxa yezibakala ezimbini: ukubonisa ukusonga okushukumayo kunye noyilo lwe "Infinity" kwisikrini seGPS S10 esiguqula ngokupheleleyo umnxeba. Ngezi kubhejwa ezimbini makhulu ibonisa ukuba yintoni ukuyila ngokutsha kunye nokuthatha umngcipheko ukuzisa amanye amava ahluke ngokupheleleyo kulawo sikwaziyo namhlanje.
1 Uhlaziyo kuyilo lweselfowuni
2 Isamsung ibilunge kakhulu kwinotshi
Uhlaziyo kuyilo lweselfowuni
Kwaye inyani umntu anokuyifumana ukondliwa kancinci kukusilela kokuyila kunye nomdla yeenkampani ezininzi ukuzama okanye ukubeka emngciphekweni ukuzisa amanye amava kwintengiso. U-Apple uzisa "inotshi", njengaleyo ingcinga ethathwe apho ingaziwa khona, kwaye wonke umntu uyayilandela kwaye emva koko athethe malunga nokuba bayayila na, kuthekani ukuba i-AI entsha iza kuthini ukuba enye ... Uxolo, kodwa ke Inye kuphela into eyenziweyo kukukhuphela imarike kwaye uyigcwalise ngokufanayo.
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo iSamsung yazisa enye yezona kubheja zayo zikhulu kakhulu ukuba zihambe kude kukhuphiswano. Uyenzile nge iselfowuni esongayo eya kusivumela ukuba sidlule ubungakanani ukusuka kwifowuni ukuya kwithebhulethi njengoko kufanelekile kuthi. Kwaye ayenzi njalo kwifomathi kuphela njengesindululo sokusonga kukaRouyu, ukuba akukho njalo ibhengeza ukufika kwe-UI enye, umaleko wakho omtsha oya kusivumela ukuba sivule ii -apps ezi-3 kuloo fomathi yethebhulethi yeselfowuni yakho esongelayo.
Ayiphumelelanga kuphela ukuzisa enye ifomathi kuyilo kunye nokusonga isikrini, kodwa kwangaxeshanye izisa i-UI enye, ujongano olulungelelaniswe ngokugqibeleleyo inika intsingiselo engakumbi kobo buchule bokutshintsha phakathi kwescreen esincinci okanye esikhulu.
Isamsung ibilunge kakhulu kwinotshi
Kwaye kuyinyani, iSamsung ibisoyika ukuba wonke umntu angayilandela iApple nge-notch, kuba ngoku intengiso igcwele kuthotho lweefowuni eziphezulu ekungekho mntu ugcinwa kuzo. Nokuba yiHuawei, okanye iXiaomi okanye i-LG phakathi kwabanye abaninzi. Bonke baye kutshiswa inotshi ukushiya imarike ekruqulayo kunye ne-bland, apho sele ebeka khona umququ wokugqibela UGoogle kunye nePixel 3 XL yayo.
Kwimicimbi yeenyanga Simkile kwimarike ekruqulayo, ekungekho nkampani ekhokelayo eyaziyo ukuba iyilenza njani into entsha, i-Samsung yokwaphula yonke into ngefowuni esongekileyo kwaye iyakuba yintoni iGPS S10 enescreen se "New Infinity" apho isakhelo sonke sangaphambili sisikrini; Sele sithethile ngezihlandlo ezinqabileyo Njani uphawu laseKorea uyifihlile ikhamera y isivamvo somnwe kwiminwe eskrinini.
Yifowuni… yicwecwe ... Yifowuni etyibilika kwithebhulethi! # SDC18 pic.twitter.com/FgwpJPjqTn
- ABAPHUHLISI BASAMSUNG (@samsung_dev) Novemba 7, 2018
Ngamanye amagama, i-Samsung ikwazile ukuyenza masihambe ekukruquleni kwenotshi siye kwixesha elizayo, esele ibanjiwe ezandleni zethu nala «New Infinity» screen kunye nokusonga mobile. Kwaye ngaphezulu koko ilushiye ukhuphiswano neetapile ezishushu ezandleni zabo, kwaye, njani ukuba bangayazi indlela yokutshintsha ikhosi kunyaka olandelayo, bazakubabona bekrwada kakhulu. ukhaliphile kwaye ukhaliphile ukubonisa intengiso ephezulu enotshi ene-Samsung ene-screen sonke?
Nditsho nesindululo se-Samsung sokuba phakathi kuluhlu yinto eyahlukileyo kakhulu kunoko sikubonileyo. Uyakwazi ukuzonwabisa ngokujija kunye Ezo zikrini Infinity-V, Infinity-U kunye ne-Infinity-O.
Isamsung isandula ukuguqula imakethi eshukumayo. Kwaye uthini, malunga nokuba uninzi luya kuyithenga itekhnoloji yabo ... Kodwa sesinye isihloko esiza konwaba kunye naso kunyaka olandelayo xa abanye beqala ngokubheja kwabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Isamsung yenza ubudenge kulo lonke ukhuphiswano "notch" yayo
Imidlalo yeFossil: Nxiba i-OS kunye ne-Snapdragon Wear 3100 yale smartwatch
Ungayiguqula njani i-Android yakho ibe yi-Oneplus 6T